दोधारमा कांग्रेस : देउवा र रामचन्द्रबीच किन कित्ताकाट ? (भिडियाेसहित)
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस पनि सडक संघर्षमा छ । उसले यसअघि प्रतिनिधिसभाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेकोमा अस्ती शनिबार त्यो भन्दा अझ तल झर्दै प्रदेश सभाका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा विरोध सभाहरु गर्यो ।
प्रतिगनमनविरुद्ध भन्दै गरेको आन्दोलन भए पनि यो केका लागि हो नेताहरुका अभिव्यक्ति र सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिका देख्दा केही अचम्म लाग्दो छ । एकातिर सरकारको विरोध भनेको छ, अर्कोतिर देउवा भित्रभित्रै चुनावतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । उनले शनिबार पनि काठमाडौंको कार्यक्रममा चुनावलाई ‘सर्बोच्च अदालत भन्दा ठूलो जनताको अदालत’ भने । त्यस्तो जनताको अदालतमा जानका लागि कांग्रेस डराउन नहुने उनको धारणा थियो । उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला लगायत भने प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सच्याउने दिशामा केन्द्रित हुनु पर्ने भन्दै आएका छन् । देउवाको फोकस आन्दोलनलाई चर्काउने भन्दा चुनावी तयारी गर्ने तर्फ केन्द्रीत छ । उनी निकटका नेताहरुले त्यस्तै धारणा पनि व्यक्त गर्दै आएका छन् । देउवा किन चुनाव चाहन्छन् ? उनको आगामी रोडम्याप के छ ? अनि कांग्रेसभित्र देउवाका प्रतिद्वन्द्वी पौडेल किन प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना मात्र भन्दैछन् ? उनको रोडम्याप के छ ?
देउवा किन चुनाव भन्छन् ?
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कांग्रेसले दुई चरणको विरोध प्रदर्शन गरिसक्यो । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेर विरोध प्रदर्शन गर्ने भयो । त्यो विरोध प्रदर्शनमा देउवा धेरै इच्छुक थिएनन् । उनले बैठकमै नेताहरुलाई भने विरोध प्रदर्शन सर्बोच्च अदालतमा विचाराधिन प्रतिनिधिसभा विघटनको बारेमा नबोलि गरौ । यसमा कांग्रेसको देउवाविरोधी पक्षका नेताहरुले विरोध गरे । विरोधको स्वरुप कहाँ केन्द्रीत गर्ने भन्ने पछि बहस भयो । यदी विरोध गर्ने हो भने त्यसलाई एउटै ठाउँमा संगठित गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने भन्दा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत गर्ने भन्ने सहमति थियो । त्यही अनुसार पहिले प्रतिनिधिसभाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध भयो । त्यसपछि गत शनिबार प्रदेश सभाका ३३० निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध गर्यो । ती दुबै प्रदर्शनमा देउवाले जनतामा जाने कुरालाई अन्यथा लिन नहुने, बरु ओलीलाई चुनाव गराउनै पर्ने बाध्यता सिर्जना तर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।
देउवाले अहिले संसद पुनर्स्थापना भन्दा प्रतिनिधिसभाको नयाँ चुनाव भन्नुका पछाडि अहिले ठूलो मात्रामा विजय हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने उनको आंकलन हो । गएको चुनावमा कम्यूनिष्ट पार्टीको गठबन्धन बन्दा चुनाव हारिएको उनको बुझाई छ । अहिले कम्यूनिष्ट पार्टी छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा तात्तातै चुनाव भए सबै ठाउँमा कांग्रेसले जित्ने, उस्तै पर्दा एकल बुहमत आउने बुझाई देउवा पक्षका नेताहरुको छ । चुनावमा कम्युनिष्ट पार्टीका दुईटा पक्षहरु आपसी विरोध गर्ने, त्यो बेलामा कांग्रेसतर्फ धेरै भोट जान सक्छ । त्यति मात्र होइन, सरकारले राम्रो काम गरेको छैन, कम्युनिष्टहरुले स्थिरता दिन्छु भनेका थिए, ३ बर्षमा संविधान समेत धरापमा पारे भन्ने एजेण्डा पनि बोकेर जान सकिन्छ । त्यसैले जति छिटो चुनाव भयो त्यति बढी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने देउवाको बुझाई छ । जति ढिलो चुनाव भयो त्यति अहिलेको माहौल सेलाउन थाल्छ । कम्युनिष्टहरु फेरि चुनावी गठबन्धन गरेर उत्रिन सक्छन् । त्यो बेलामा कांग्रेसलाई फाइदा नहुन सक्ने अवस्था रहन्छ । देउवाले चुनाव भन्नुको पछाडि यो एउटा कारण हो ।
अर्को कारण यदी तत्काल चुनावमा जाने भयो भने पार्टीको महाधिवेशन अझै केही समय सार्न पाइन्छ । चुनावी काममा लाग्ने भएपछि तत्काल महाधिवेशन गर्न सम्भव हुँदैन । महाधिवेशनमा अहिले देउवाविरुद्ध सबै उत्रने तयारी गरेकाले उनलाई समस्या बढेको छ । त्यही भएर यदी चुनावमा जान पायो भने महाधिवेशनका लागि अनुकुल वातावरण बनाउन समय पाउन सकिन्छ भन्ने देउवा पक्षहरुको भनाई छ । चुनाव भईहाल्यो भने, अहिलेको भन्दा पक्कै पनि कांग्रेसको पोजिसन बलियो हुन्छ । उस्तै परे बुहमत समेत आउँछ । चुनावबाट पार्टीलाई बलियो बनाएपछि पार्टीलाई जिताएको सभापति भन्ने आधारमा महाधिवेशन आफ्नो लागि सहज हुन सक्ने देउवाले ठानेका छन् । त्यसैले पहिले चुनावबाट शक्ति आर्जन गर्ने त्यसपछि महाधिवेशनबाट सभापति दोहोरिने देउवाको दाउ छ । यही रोडम्याप लिएर देउवा अहिले संसद पुनर्स्थापना भन्दा चुनावतर्फ छन् ।
पौडेल किन पुनर्स्थापना भन्छन् ?
सभापति देउवाले चुनावतर्फ आँखा लगाएका बेला पौडेल प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनामा केन्द्रीत छन् । पौडेल प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको विपरित गएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भनेका छन् । त्यसैले कांग्रेस लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पक्षमा उभिनु पर्ने भएकाले यो बिषयलाई बोकेर हिड्नु पर्छ भन्दै आएका छन् । उनले पुनस्र्थापनामै जोडबल गर्नुको पछाडि के कारण छ भने लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता, विधि पद्धति, अनुशासनलाई पौडेल देउवा भन्दा बढी निष्ठा राख्छन् । किनकी उनको नाम अहिलेसम्म यस्ता बिषयमा कहिल्यै आलोचना भएको छैन । त्यसैले संविधानको विपरित भएको कुरा सबै राजनीतिक तह र सर्बोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधिशहरुले पनि व्यक्त गरेको बेला कांग्रेस दुविधामा बस्न नहुने उनको कुरा हो ।
अर्को कारण के हो भने, देउवाले चुनावलाई देखाएर महाधिवेशन टार्न खोजेको रुपमा पौडेल छन् । चुनाव भए महाधिवेशन सार्ने र त्यसपछि आफू शक्तिशाली भएर आउने देउवाको रोडम्याप पौडेलले बुझेका छन् । त्यसैले जति महाधिवेशन ढिलो भयो त्यति आफू पछि परिने पौडेलेले ठानेका छन् । महाधिवेशन तत्काल भइहाले देउवाले विपक्षीको भूमिका राम्रो खेल्न नसकेको, सरकारसँग मिलेर विभिन्न नियुक्तिहरुमा भागबन्डा गरेको लगायतका कुरा उठाएर महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन सकिने पौडेलले ठानेका छन् ।
यदी महाधिवेशन पछि धकेलियो भने देउवाका अहिलेका सबै कमजोरीहरुलाई एजेण्डा बनाउन गाह्रो पर्न सक्छ । चुनावपछि महाधिवेशन गर्दा नयाँ सन्दर्भमा पार्टीलाई शक्तिशाली बनाएको जस देउवातर्फ जान्छ । त्यो बेला आफू कमजोर हुने बुझाई पौडेलको छ ।
देउवा र पौडेलको यही आ–आफ्नो स्वार्थले गर्दा अहिले कांग्रेसभित्र संसद पुनर्स्थापना कि चुनाव भन्नेमा दोधारे अभिव्यक्ति आइरहेको देखिन्छ ।
प्रकाशित: २७ पुस २०७७ १९:०७ सोमबार
जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर
कित्ताकाट सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन
नियमावली नबनाइ जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा भएपछि संसदीय समितिको प्रश्न
कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश